Xeer Ilaaliyaha Guud oo u goodiyay Warbaahinta | KEYDMEDIA ONLINE
Xeer Ilaaliyaha Guud oo u goodiyay Warbaahinta
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Soomaaliya, Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa shir jaraa’id oo uu ku qabtay Muqdisho kasoo saaray digniin ku socota warbaahinta isagoo ku eedeeyay “faafinta wararka ku tiri-ku-teenka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xeer Ilaaliyaha Guud ee Soomaaliya Suleyman Maxamed, ayaa handadaad iyo caga-juglayn ku haya warbaahinta xorta ah ee ka howlgasha dalka, gaar haan Muqdisho, oo Maamulka Farmaajo ku dhibaateeyo wariyeyaasha.
Wuxuu ku dhawaaqay in xafiiskiisa uu baaritaan ku wado warbaahin uusan sheegin magacyadooda oo ku yaalla Muqdisho, islamarkaana uu dhowaan maxkamad la horgeyn doono, si ay uga jawaabaan eedeymaha “faafinta warar ku tiri-ku-teenka.
“Waxaan ogaanay warbixino iyo wareysiyo gaar ah oo salka ku haya macluumaad been abuur ah. Warbixinadan waxay khalkhal gelinayaan amniga dalka iyo dadaallada dowladda, ”ayuu yiri Xeer Ilaaliyaha Qaranka.
Dowladda Soomaaliya iyo Maamul Goboleedyada dalka xubnaha ayaa lagu eedeeyay inaysan ixtiraamin xorriyadda saxaafadda, iyagoo faaf-reebka ku sameeya wararkooda, sidoo kalena u jeediya hanjabaado oo ugu dambeysay mida Xeer-ilaaliyaha Guud.
Bishii lasoo dhaafay, Booliska DF ayaa hor-istaag ku sameeyay weriyayaal doonayey inay soo tebiyaan qarax dhimasho sababay oo lala beegsaday Gelato Devino ee ku taalla Waddada Garoonka Diyaaradaha Muqdisho.
Dowladda Farmaajo ayaa caburisa Warbaahinta madaxa-banaan, iyadoo u marayso cabsi gelin, xarig aan loo meel dayin iyo xukuno lagu rido wariyeyaasha ka howlgala Muqdisho, oo tacadiyadda ugu badan saxaafadda loogu geysto.
0 Comments Topics: farmaajo muqdisho saxaafadda soomaaliya